Waxyaabo Dhab Ah Oo Aysan Warbaahinta Ka Sheegin Qaraxii Gelato Devino. | Xaqiiqonews
Waxyaabo Dhab Ah Oo Aysan Warbaahinta Ka Sheegin Qaraxii Gelato Devino.
Qarax ayaa ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda Gelato Devino oo dhacda inta u dhaxeysa Km4 iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, inta la xaqiijiyey qarax ayaa sababay dhimashada 15 qof.
Qaraxan ayaa ku soo aaday xilli magaalada ay la ciirciireyso buuqa shirarki doorashada, sidoo kale qaraxan oo uu fuliyey qof naftii hure ah, ayaa imaanaya todobaad ka dib qaraxii iskool boolisiya oo uu isna fuliyey qof is soo miidaamiyey.
Maxaa Loo Beegsaday Si Gaar Ah Maqaayadda Gelato Devino.?
Fasiraadyo kala duwan ayaa laga bixiyey sababta goobtan loo qarxiyey, qaar ka mid ah mucaaradka ayaana arinta luqunta u geliyey maamulka Farmaajo.
Al-shabaab ayaa ku dooday in goobta la beegsaday ay aheyd waxa ugu yeereen “fadhiisan dowladeed”, iyaga oo sheegay in qaraxa ku dileen saraakiil, balse ma aysan kala saarin mucaarad iyo muxaafid toona.
Dadka qaraxa ku geeriyooday oo u badnaa dhalinyarro isku heeb ah, ayaa inta la xusay waxaa ka mid ahaa Bishaar oo ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee Itoobiya, halka dhalinyrada qaar ee goobta ku geeriyootay ay ka tirsanaayeen waaxda jinsiyadaha iyo socdaalka.
Qaraxan waxaa fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, arintani ayaana imaaneysa xilli isla qarax noocan ah uu Muqdisho ka dhacay isla bishan, qaraxaasi oo lala beegsaday maqaayad ay fadhiisan jireen booliska oo ku dhaw iskool boolisiya.
Xeeladdan cusub ee Al-shabaab, ayaa u muuqata in ay uga soo guureen adeegsigga baabuurtii qasaaraha badnaa, ka dib markii Df-ka ay adkeysay isku socodka baabuurta Muqdisho.
ka Hor Weerarka
Weerarka ayaa yimid xilli magaalada Muqdisho ay ka taagneyd xiisadda doorashooyinka, iyada oo hawada la isku marinaayey hanbjabaadyo aad culus.
Sidoo kale qaraxa ayaa dhacay saacado ka dib markii uu dalka soo gaaray sii hayaha wasiirka Difaaca Mareykanka Christopher Miller oo qaab dhuumasho garoonka Aadan Cadde kula kulmay saraakiisha Mareykanka ee Soomaaliya Ku Sugan.
Saacadihii Uu Weerarka Socday
Laamaha amniga Df-ka, gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ayaa lagu canaantay qaabkii ay ula falgaleen dhacdada.
Gudoomiyaha aminga iyo siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Yare ayaa lagu eedeeyey in saacadahii uu qaraxa dhacaayey uu facebook-kiisa soo dhigay qoraalo qeyb ka ah ololaha Farmaajo.
Tani waxa ay calaamad su’aal weyn dul saareysaa saraakiisha amniga Banaadir oo xilliyadan oo kale ku mashquula ololayaasha doorashada, waana sababta qaraxayada ugu badan u dhacaan xilliyada kala guurka.